Aadan Dhoolayarre Oo Soo Bandhigay Tallooyin Lagu Toosinayo Garsoorka Dalka
Wednesday January 07, 2015 - 08:57:53 in Wararka by Editor Caynaba News
Hargeysa (CYN)-Wasiirkii hore ee Cadaaladda Somaliland Md. Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) ayaa soo bandhigay tallooyin uu u arko in lagu sugi karo garsoorka dalka.
Aadan Dhoolayare waxa uu qoraal uu na soo gaadh siiyay sharaxaad dheer kaga bixiyay waajibaadka Guddiga cadaaladda iyo wax ka bedal uu soo jeedinayo in lagu sameeyo qaabka loo soo xulo xubno ka mid ah oo shaqooyin kale oo culus qaranka u haya oo aan fursad u helaynin inay xubin buuxda ka noqdaan guddida cadaaladda. Waxaanu qoraalkiisa ku yidhi sidan:-
"Waxaan jeclaystay maqaalkan inaan kaga hadlo dhinaca cadaaladda dalkeenna
kuna iftiimiyo xogo iyo waayo aragnimo aan ka dhaxlay wakhtigii aan ahaa Wasiirka wasaarada cadaalada,taas oo aan ku ogaaday meelaha iyo sababta ay ku timaado cadaalad darrada ay shacabku ka cawdaan had iyo jeer.
Aniga oo ku iftiiminaya intaan aan ka ogahay meelaha khaladaadku ku jiro oo ku saabsan garsoorka dalkeenna.Marka hore waxaan ka cudur-daaranayaa in aanan u jeedin khaladaad aan ku cambaaraynayo garsoorayaasha maxakamadaha laakiin ay tahay inaan sheego haddii wax laga bedalo nidaamka ay u shaqeeyaan gudida cadaalada ee dalku.Waxaa laga yaaba inaanay dad badani ogayn guddida cadaaladda iyo waxay ay qabato iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ay leeyihiin iyo siday ku noqdaan guddida cadaalada ee dalka.
Haddii aan in yar dadka u iftiimiyo shacabka guddida cadaaladu waxay tahay,
Guddida cadaaladu waa guddida u saraysa garsoorka dalka una xil-saaran dabagalka iyo habsami u socodka cadaalada dalka lana xisaabtami karta garsoorayaasha maxakamadaha dalka islamarkaana awood buuxda u leh inay u digto,eryi karto, dalacsiin karto, abaal-marin karta garsoore kasta xumaan iyo wanaag wixii uu garsooray.
Waa guddida loo caban karo ama ay dacwad ka gudbinayso garsoore ay ka tirsanayaan cadaalad darro qofka lagu sameeyay,si ay gudidaasi u dabagasho waxna ka ogaan lahayd waxa uu qofkaasi ka cabanayo haddii ay jirto ka dibna tallaabo sharciga waafaqsan ay gudida cadaaladu uga qaadi lahayd garsooraha laga cabanayo waa haddii lagu khalad lagu helo.
Gudidaasi waa guddi madaxbanaan oo leh awood dastuuri ah oo uu dastuurku siiyay loona baahan yahay inay waajibaadka gutaan.
Hadaba, sidee bay ku yimaadaan guddidaasi kuraasta ay ku fadhiyaan.
waxaan jeclahay inaan iyadana sharaxaad kooban ka bixiyo habka ay ku yimaadaan.
Gudidaasi waxay ka kooban tahay Gudoomiyaha maxakamada sare oo ah gudoomiyaha gudida waxaanu ku yimaada dastuurka oo uu ku magacaaban yahay waxa kale oo ka mid ah laba garsoore oo leh waayo aragnimo sare oo ka tirsan maxakamada sare waxaana magacaaba madaxweynaha laakiin waxa tilmaanta ka bixinaya dastuurka cida ay noqonayaan.
Waxaa kale oo ka mid ah gudoomiyaha Hayada shaqaalaha ,xeer ilaaliyaha guud,agaasimaha guud ee wasaarada cadaalada.
Waxa kale oo ka mid ah laba xubnood oo uu soo magacaabo gudoomiyaha baarlamaanku iyo laba xubnood oo uu soo magacaabo gudoomiyaha golaha guurtidu.Dhammaan xubnahaas waxa tilmaan cad ka bixinaya dastuurka dalka oo
aan sheegaynin hebel laakiin sheegaya kursiga noocaas ah cidda loo magacaabo ee ku fadhida inta aan ka ahayn afarta xubnood ee golayaashu soo magacaabaan kuwaas oo ay gudoomiyayaasha labada gole soo magacabaan ciddi ay doonaan laakiin dastuurku tilmaamayo heerkooda waxbarasho iyo waaya aragnimadooda.
Waxaan filaya inay innagu filan tahay cidda ay yihiin guddida cadaaladu iyo sida ay ku yimaadaan iyo waajibaadkoodaba.
Hadaba, haddi aan u soo dego dulucda iyo ujeedada ee aan u qoray maqaalkan iyo tallooyinka aan u soo jeedinayo in wax laga bedelo sida uu dastuurku ku magacaabayo ka mid noqaashaha guddida cadaalada dalka u saraysa taas oo aan qabo sababaha ragaadiyay cadaalad la’aanta iyo dib u dhaca kiisaska ama gal dacwadeedka la qaado oo qaata wakhti dheer oo ay dhib badan kala kulmaan shacabku qaarkoodna ay ku jiraan maxakamadaha in ka badan labaatan sanadood.
Hadaba taladaydu waxay tahay aniga oo aaan waxba ka sheegayn xubnahaas in wax laga bedelo nidaamka ay ku yimaadaan sababta oo ah tusaale ahaan
xubnaha ay ka midka yihiin gudoomiyaha hayada shaqaalaha,xeer ilaaliyaha guud,agaasimaha guud eewasaarada cadaalada waxay hayaan hawl maalimaadkoodii iyo xilkii loo magacaabay oo aanay wakhti dheeeraad ah u helayn inay noqdaan guddida cadaalada u saraysa ee dalka.
Halkaasna looga baahan yahay cid firaaqo u haysa oo ka shaqayn karta waajibaadka qaranku u magacaabay. Waxa kale oo la mid ah afarta xubnood ee labada gudoomiye soo xulaan oo aan la soo marin shuruudaha dastuurku tilmaamayo laakiin lagu soo xulo qof jeclaysi iyo garasho loona eegin aqoonta iyo waaya aragnimada looga baahan yahay,raali ha iga ahaadaan labada gudoomiye oo iyaga laftoodu la saaro culays kaga yimaada cida doonaysa oo soo adeegsada waji garad.
Sidaasi darteed waxaan madaxweynaha u soo jeedinayaa inuu codsado in la furo dastuurka dalka waxna laga bedelo nidaamka ay ku yimaadaan xubnaha guddida cadaalada laguna bedelo cid aan shaqo kale hayn oo fursad u hesha inay si joogta ah u gutaan shaqadooda si ay dabagal ugu sameeyaan garsoorka dalka kormeerna ku tagaan gobolada dalka iyaga oo kormeeraya xaalada garsoorka isla marka abaal mariya garsoorayaasha qabsada waajibaadkooda.
Inta aan ka ogahay gudidda cadaaladu ma fadhiistaan shirarkooda mana daba galaan cadaalada dalka taasina waxay keentay in garsoore kasta uu ka yeelo kiiska mudeeyana wakhtiga uu doono iyada oo loo baahna inay la xisaabtamaan gudoomiyayaasha maxkamadaha si ay iyaguna u ogaadaan kiisaska ay garsoorayaashu qaadayaan iyada oo aan lagu fara gelinahayn awooda garsooraha oo madax banana laakiin uu ogaado garsooruhu in lala xisaabtamayo lana abaal mariyo.
Waxaan ka cudur daaranaya inaanan eedaynayn guddidaas laakiin ay hayaan shaqooyin kale oo aan wakhti ku filan haysan taasina waa sababta aan taladan u soo jeedinyo islamarka waxaan Madaxweynaha kula talinaya in gudidda dambe waaa haddi dastuurka wax laga bedelee in loo qoro mushahar ku filan oo ay ku gutaan waajibaadkooda kuwaas oo laga dhex helayo bulshada dad leh aqoon waayo aragnimo oo qaban karo xilkaas kuwaas oo aan camal kale hayn.isla markaan laftooda la ogaado sida ay u shaqeeyaan,loona dhiso xafiis iyo miisaaniyad ay ku hawl galaan.
Waxaan ogahay inaanay xukuumaddu ka war hayn gudidaas oo aan lahayn dhisme xafiis .iyo miisaaniyad u gaar toona nasiib darase la tabayo cadaalada dalka iyada oo aan la siin daryeel ay ku gutaan waajibaadkooda
waxaan rajaynaya inuu Madxweynuhu ka fakiro sidii loo hagaajin laha cadalada dalka oo ay kow ka tahay in wax laga bedelo nidaamka ay ku yimaad guddidaasi.”